सहसचिव र उपसचिवको नयाँ भर्ना खुल्ने ! « Muluk Sanchar
कला साहित्यफोटो कथायात्राशिक्षास्वास्थ्यकृषिसूचना प्रविधिपत्रपत्रिकारोचक
सहसचिव र उपसचिवको नयाँ भर्ना खुल्ने !
३० साउन, काठमाडौं – कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणबीच पनि सरकारका विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका सहसचिव र उपसचिवमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने संकेत देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, आयोग तथा सचिवालयमा रिक्त सहसचिव र उपसचिवको संख्या पठाउन बिहीबार पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी १० भदौभित्र सबै रिक्त पदको विवरण पठाउन ती निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयले पदपूर्ति प्रक्रियाका लागि रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेकाले सहसचिव र उपसचिवमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै परीक्षा हुन सक्ने देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हाल सबै निकायमा गरेर सहसचिवतर्फ अप्राविधिक ९प्रशासन० तर्फ ५२ र प्राविधिक सेवा समूहमा ३० गरी ८२ बढी पद रिक्त छन् ।
उपसचिवतर्फ दुवै सेवा समूहमा गरी २ सयभन्दा बढी पद रिक्त छ । जसमा प्रशासन सेवाको १ सय ३० र अप्राविधिक सेवाको ७० बढी पद रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुुवै सेवा समूहमा गरी सहसचिवतर्फ ८२ र उपसचिवतर्फ २ सय जना गरी २ सय ८२ पदका लागि परीक्षा हुने देखिएको हो ।
सामान्यको सो मागपत्रअनुसार अब सबै निकायले आफ्नो निकायमा रिक्त सहसचिव र उपसचिवको पद संख्या पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी पठाइएको पदसंख्याका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदपूर्तिका लागि लोकसेवासमक्ष सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ । लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक परीक्षा क्यालेन्डरअनुसार नै सहसचिवदेखि खरिदारसम्मको परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
पत्रकार महासंघ रोल्पाको निर्वाचनका दुई अध्यक्षको उम्मेदवारी
बालअधिकार समितिद्वारा विद्यालय छोडेका बालबालिकाको घरभेट कार्यक्रम सम्पन्न
प्रचण्ड–बाबुराम भेटघाटमा !
दीपक–दीपाको होली गीत ‘धनियाँ के होली’ सार्वजनिक
उत्पादन घट्दा कखुराको मासुको मूल्य बढ्यो
मुलुक सञ्चार मिडिया प्रा.लि.
ठेगाना: रोल्पा नगरपालिका—२ लिबाङ,रोल्पा
सूचना विभाग दर्ता नं: ००/०७६-०७७
copyright © muluksanchar.com, All Rights Reserved.